Wholesale Bucket Teeth Heavy Duty vagadziri uye vatengesi |Pingtai
Bucket Mazino Anorema Basa
Packaging details: Plywood kesi
Ndeipi nzira yekuyerera kwemazino ekuchera bhaketi
Maitiro ekuyerera kweanochera bhaketi mazino: jecha kukanda, forging casting, chaiyo kukanda.
Excavator bucket zino chinhu chakakosha chinodyiwa chikamu pane chekuchera.Zvakafanana nemazino evanhu.Iyo inobatanidza bhaketi zino rinoumbwa nemazino uye zino remuromo, uye maviri akabatanidzwa nepini shaft.Nokuti iyo bhaketi zino rinopfeka kukundikana chikamu ndiro zino remuromo, chero bedzi kutsiva kwechipiko kunogona kuva.
Kupatsanura zvinoenderana nekushandiswa nharaunda yeanochera bhaketi mazino.Mazino ekuchera bhaketi anogona kukamurwa kuita mazino edombo (anoshandiswa simbi, matombo ematombo, nezvimwewo), mazino evhu (anoshandiswa kuchera ivhu, jecha, nezvimwewo), mazino econical (anoshandiswa kumugodhi wemarasha).
Mazino ekuchera bhaketi anogona kukamurwa kuita akachinjika pini bhaketi mazino (Hitachi excavator), horizontal pini bhaketi mazino (Komatsu excavator, Caterpillar excavator, Daewoo excavator, Kobelco excavator, etc.), rotary digging bucket mazino (V akatevedzana bhaketi mazino).
Bucket mazino ruzivo ruzivo
Tsanangudzo: BUCKET MENO MINING OPERATION RAIRERA DUTY
Supply Ability: 10000 PCS / mwedzi
Material: Alloy simbi
Nzira: Precision Casting / Forging
Hunhu: basa remugodhi rinorema basa
Warranty nguva: 24 mwedzi
Ruvara: Yero kana Tsvuku kana Dema kana Mutengi anodiwa
Nzira yekutonga mazino asina kukodzera emubhakiti emucheri
Mazino ekuchera bhaketi pasi pemamiriro ekushanda akajairwa kwemazuva matatu (anenge maawa makumi matatu nematanhatu) anotadza kukodzera sezvigadzirwa zvisina kukodzera.Pane zviri pachena zvikwambo zvemuforo pamusoro pemazino emugomo uye chidimbu chidiki cheplastic deformation pamuromo.Kuongorora kwesimba rezino remubhaketi rinoshanda chiso uye chinhu chakacherwa chekubata, mukuchera kwakazara mumatanho akasiyana-siyana ekunetseka kwakasiyana, chikamu chechikamu chekutanga kusangana nepamusoro pezvinhu, nekuti kumhanya kunokurumidza, muromo webucket. zino nekukanganisa kwakasimba.Kana iyo bhaketi zino goho rakaderera, rinogadzira deformation yepurasitiki pamuromo.Mazino emubhaketi asingakodzeri aikuyiwa, akakwenenzverwa uye akaita ngura, uye akawanikwa aine grey kutenderera uye kusviba pakati, zvichiratidza kuti mazino emugomo aive akakandwa.Iyo huru alloy components (mass chikamu %) ndeye 0.38C, 0.91Cr, 0.83Mn uye 0.92Si.The mechanical properties yesimbi zvinhu zvinoenderana nekuumbwa uye kupisa kwekupisa kwekugadzira fekitari.
Ndeapi mabhenefiti ekugadzirwa kweanochera bhaketi mazino ekambani yedu
Bucket zino performance analysis neMLD-10 kupfeka bvunzo muchina kupfeka bvunzo.Kupfeka kupikisa kwematrix uye kuisa kuri nani pane iyo yakadzimwa 45 simbi pasi pemamiriro ekupfeka diki.Panguva imwecheteyo, kupikisa kupfeka kwematrix uye kuiswa kwakasiyana.Iyo matrix inomira-inomira pane inoiswa.Kuumbwa pamativi ose maviri ematrix uye kuiswa kune pedyo neiyo mumeno emubhaketi.Kupinza mubhaketi zino kunonyanya kuita basa resimbi inotonhora.Munguva yekukanda, iyo matrix tsanga yakakwenenzverwa kuti ivandudze simba rayo uye kupfeka kuramba.Nekuda kwesimba rekukanda kupisa, izvo zvinopinza zvinoburitsa zvimiro zvakafanana muwelding kupisa kwakakanganiswa zone, iyo isingaite basa mukusimudzira kupfeka kuramba.Kana kurapa kwakakodzera kwekupisa kunoitwa mushure mekukanda kuvandudza chimiro chekuisa, iyo flax kuramba uye hupenyu hwebasa remazino ebhaketi huchavandudzwa zvakanyanya.
1.Iwe uri mutengesi kana mugadziri?
Isu tiri mugadziri ane kodzero dzekutumira kunze.Fekitori yedu iri paQuanzhou Nanan guta reFujian mudunhu China.Tine anopfuura makore makumi matatu ruzivo muindasitiri iyi.
2.Ndingave sei nechokwadi kuti chikamu chichakodzera bulldozer yangu?
Ndokumbira utipe nhamba yemuenzaniso kana nhamba yekutanga yezvikamu, isu tinopa mifananidzo kana kuyera saizi yemuviri uye nekusimbisa newe.
3.Ndeipi odha yako shoma?
Zvinoenderana nerudzi rwechigadzirwa chaunotenga.Kana chiri chigadzirwa chenguva dzose uye isu tine stock, hapana chikonzero cheMOQ.
4.Ungabatsira here vatengi kugadzira zvigadzirwa zvitsva?
Dhipatimendi redu rekuvandudza tekinoroji rinonyanya kugadzira zvigadzirwa zvitsva zvevatengi.Vatengi vanofanirwa kupa madhirowa, zviyero kana masampuli chaiwo ekutarisa kwedu.
Iyo yakajairika nguva yekutumira ingangoita mwedzi mumwe, Kana isu tine stock kweinenge vhiki
6. Zvakadini nemitemo yekubhadhara?
T/T kana L/C.mamwe mazwi zvakare akataurirana.
7.Ungagadzira zvigadzirwa nemhando yedu?
Chokwadi, tinogamuchirwa kushanda pamwe chete sevhisi yakagadzirirwa.
OEM / ODM inogamuchirwa, Kubva pane pfungwa kusvika kune zvakapedzwa zvinhu, tinoita zvese (dhizaini, prototype ongororo, zvishandiso uye kugadzira) mufekitori.
1.Imwe gore waranti, kutsiva kwemahara kune akatyoka ane abnormal kupfeka hupenyu.
2.Product customization OEM / ODM kurongeka.
3.Provide pamutsetse kana vhidhiyo rubatsiro rwehunyanzvi kune vatengi vedu.
4.Help iwe kukudziridza musika wako nehutano hwedu hwepamusoro uye basa rakanakisisa.
5.VIP kurapwa kune yedu yega mumiririri.
Zvakapfuura: Bucket Pin Heavy Duty
Zvinotevera: Carrier Roller Mining Operation
Caterpillar Dozer Zvikamu D7G D7F Mberi Idler 1S8...
Komatsu Undercarriage Zvikamu D475 Front Idler
maspare parts bulldozer D60
D10 IDLER GP-TRACK 9W9734 - Caterpillar
Excavator Bucket Wear Parts, Rubber Track Rollers, High Simba Bolt, Bearing Track Roller, Excavator Bucket Kucheka Kumucheto, Excavator Undercarriage Wear,